Global Voices teny Malagasy » Sarivongana roa hafa ankalazan’i Kazakhstan ny mpitarika azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Jolay 2021 5:29 GMT 1	 · Mpanoratra Paolo Sorbello Nandika avylavitra
Fanalàna sarona ilay sarivongan'i Nazarbayev tao Turkistan, atsimon'i Kazakhstan. Sary: governemantam-paritr'i Turkistan .
Ny 5 Jolay, andro iray talohan'ny fitsingerenan'ny faha-81 taonany, nisy sarivongana alimo  iray maneho an'i Nazarbayev nalàna sarona tao afovoan-tanàna. Tamin'izay fotoana izay ihany, tany Nur-Sultan renivohitra, nalàn'i Tokayev ny rakotry ny sarivongana iray hafa  an'i Nazarbayev, mampiseho fa miely hatraiza hatraiza  ary tsy azo hozongozonina  ny fanindrahindràna olona atao an'ilay lazaina ho “Mpitarika ny Firenena,” na Elbasy, izay nitondra ny firenena nandritra ny taompolo telo.
Ao Turkistan, efa tsy nahafaly ireo mponina tao an-toerana ny nanambaràna tamin'ny volana May ny hananganana sarivongana vaovao hankalazàna an'i Nazarbayev. Teny anaty media an-tambajotra no nipoitra ireo honohono  momba ny fanorenana sarivongana alimo iray  ho an'ilay mpitondra teo aloha.
Ankoatra izay, ny 25 May, tao anaty fanambaràna  ampahibemaso iray no nilazan'i Bilal Çakıcı, tale lefitra ao amin'ny Fikambanana Iraisampirenena momba ny Kolontsana Turkic, fa ireo lova napetrak'i Elbasy dia tokony hankalazaina ao Turkistana, izay tsy ela akory izao no nohosorana  ho “renivohitra ara-panahin'ny tontolo Turkic”.
Toy ny efa fahita mahazatra, nilaza  ampahibemaso i Nazarbayev fa aleony fepetra miantoka ny firoboroboan'ny vahoaka, fa tsy sarivongana maro.
Nandritra ny fitsidihana iray tamin'ny May, noderain'i  Nazarbayev ny firoboroboana malaky misy ao Turkistan, tamin'ny nilazàny fa haingana kokoa noho ny ao an-drenivohitra ny fitomboany.
Kanefa, tsy miantoka ny fahatsaran'ny asa fanorenana ny fihazakazaky ny fampivelarana, araka ny nanamarihan'ireo  mponina ao an-toerana azy taorian'ny nahitàna fihotsahan'ny ampahany tamin'ny rindrin'ilay trano vaovao Karavansaray.
“Ankehitriny dia toy ny ao anaty tontolo iray hafa mihitsy ianareo no mamily fiara, anaty tanàna iray hafa, izay tsy mbola nisy tany aloha,” hoy i  Nazarbayev miresaka ny tanànan'i Turkistan. Nefa afaka niteny izany izy ho an'ireo tanàna hafa manana arabe mitondra anarana Nazarbayev, seranam-piaramanidina Nazarbayev, na oniversite iray mitondra anarana Nazarbayev.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/07/07/153309/
 governemantam-paritr'i Turkistan: https://www.gov.kz/memleket/entities/ontustik/press/news/details/226080?lang=ru
 ny rakotry ny sarivongana iray hafa: https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-pamyatnika-elbasy-nursultanu-nazarbaevu-36353
 miely hatraiza hatraiza: https://thediplomat.com/2016/11/is-nazarbayevs-new-personality-cult-a-prelude-to-an-exit/
 tsy azo hozongozonina: https://thediplomat.com/2021/01/the-illusions-of-post-nazarbayev-kazakhstan/
 sarivongana alimo iray: https://informburo.kz/special/bronzovyi-pamyatnik-nursultanu-nazarbaevu-predlagayut-ustanovit-v-turkestane
 hoy i: https://forbes.kz//process/urbanity/nazarbaev_o_turkestane_myi_postroili_esche_odin_serezneyshiy_obyekt/